Crankshaft fiara, Flywheel fiara, Camshaft fiara - SAMUEL
Crankshaft fiara jereo >>
Izy io dia mety amin'ny fiara, sambo, fiara enjeniera, milina fambolena, milina mpamokatra, kalitao tany am-boalohany, tsara endrika, avo hakitroka, malama, hamirapiratra ary maharitra rehefa vita. Ny vokatra tsirairay dia nandalo fitsapana henjana ary azo antoka ny kalitaony. Ny fonosana boaty dia manana endrika tsara sy tsingerina famokarana maharitra: 20-30 andro fiasana, fonosana tsy miandany / fonosana tany am-boalohany, fomba fitaterana: tany, ranomasina ary rivotra.
Camshaft fiara jereo >>
Izy io dia mety amin'ny fiara, sambo, fiara enjeniera, milina fambolena, kalitao tany am-boalohany, miaraka amin'ny endrika bika, hakitroka avo, malama, famirapiratana ary faharetana aorian'ny famaranana. Ny vokatra tsirairay dia nandalo fitsapana henjana ary azo antoka ny kalitaony. Ny fonosana boaty dia manana endrika tsara sy tsingerina famokarana maharitra: 20-30 andro fiasana, fonosana tsy miandany / fonosana tany am-boalohany, fomba fitaterana: tany, ranomasina ary rivotra.
Fiara manidina fiara jereo >>
Loha varingarina automotive jereo >>
Ny crankshaft fiara avo lenta dia mety amin'ny Ren ...
Karazan-tsarety crankshafts feno fiara feno ...
Shijiazhuang Samuel Auto Parts Co., Ltd. dia mpamokatra matihanina amin'ny faritra. Nandritra ny taona namokarana sy niasa dia namorona tsipika famokarana sy fanodinana miaraka amin'ny teknolojia faran'izay tsara, fitaovana famokarana mandroso, fomba fitsapana kilasy voalohany ary fitantanana kalitao henjana. ISO9001 2000 fanamarinana rafitra kalitao iraisam-pirenena, ny kalitao dia mahatratra ny fenitra ara-teknikan'ny motera crankshaft ao anaty JB / T6727-1999, JB / T51049-1999.
maharitra ny vaovao